‘विनय गुटका विद्यार्थी मोर्चालाई शिक्षाको चिन्ता छ भने पहिले कञ्चनजङ्घा स्कूलमा तैनाथ एसएसबी हटाउ’ – खबरम्यागजिन
HomeBreaking News‘विनय गुटका विद्यार्थी मोर्चालाई शिक्षाको चिन्ता छ भने पहिले कञ्चनजङ्घा स्कूलमा तैनाथ एसएसबी हटाउ’
‘विनय गुटका विद्यार्थी मोर्चालाई शिक्षाको चिन्ता छ भने पहिले कञ्चनजङ्घा स्कूलमा तैनाथ एसएसबी हटाउ’
October 26, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङः गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केवल गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्तिको उद्देश्य लिएर गठन भएको हो। एक-दुइजना स्वार्थी साथीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विनय तामाङ गुटमा गएर विद्यार्थी मोर्चाको नाम समेत कलंकित पार्ने काम गरिरहेका छन्।
उनीहरू गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका सदस्य नभएर तृणमूल छात्र परिषदका सदस्यहरू हुन् भन्ने आरोप लगाउँदै एक विज्ञप्ति जारी गरी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष भाष्कर राई र विद्यार्थी मोर्चा दार्जीलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष नगेन्द्र लिम्बुले भनेका छन्-विद्यार्थी मोर्चाको उद्देश्य अनि यसको आचार संहितासमेतलाई पर्वाह नगरी विनय गुटमा सामेल भइसकेका उनीहरूलाई पहाड़को शिक्षाको साँच्चै चिन्ता छ भने सबैभन्दा पहिले कञ्चनजङ्घा स्कूलमा तैनाथ एसएसबी हटाउनपर्छ।
किनभने, यस पाठ्शालामा पहाड़ अनि तराई-डुवर्सका सात सयभन्दा अधिक गरीबभन्दा गरीब नानीहरू पढ्दै आइरहेका थिए। यस स्कूलमा अहिले बंगाल सरकारले सुरक्षाकर्मी राखिदिएको छ भने सात सय नानीहरू स्कूल पढ्न वञ्चित भएका छन्।
त्यसरीनै बंगाल सरकारले विभिन्न सरकारी, निजी अनि मिशनरिज स्कूल अनि कलेजहरूमा फोर्स राखेर विद्यार्थीहरूलाई आतंकित पारिरहेको छ। विद्यार्थीहरू स्कूल अनि कलेज आउनसमेत डराउने गरेका छन्।
यो सुरक्षाकर्मीहरू कुन उद्देश्यले राखिएको हो? के नानीहरू विष्फोटक सामान बोकेर पाठ्शाला आइरहेका छन्? पहाड़को शिक्षामा चिन्ता देखाउने विनय गुटले के यो फोर्स हटाउन सक्छ? यदि सक्छ भने हटाएर देखाउन्। सबैभन्दा पहिले यो काम गरेको उत्तम हुनेछ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा अझै भनेअनुसार, विद्यार्थी मोर्चाले कहिले पनि विमल गुरूङको साथ छोड्नेछैन। किनभने विमल गुरूङ मात्र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन प्राप्तिका लागि संघर्षरत छन्। त्यसैकारण उनलाई पुलिसले पानी खेदो गरिरहेको छ। विद्यार्थी मोर्चा विमल गुरूङको ज्यानलाई लिएर चिन्तित छ।
कतै बंगाल सरकारले विमल गुरूङलाई किशनजी जस्तै हत्या गराउने त होइन? यदि विमल गुरूङलाई केही भए पहाड मात्रै होइन, सारा बंगालनै अचल बनाइ दिने पनि उनीहरूले चेताउनी दिएका छन्। विद्यार्थी मोर्चाका नेतृत्वहरूका नाड़ीमा गोर्खाको तातो रगत बगिरहेको छ। हामी त्यही गोर्खाका सन्तान हौं, जसले पहिलो अनि दोस्रो विश्‍व युद्ध लडेको थियो।
हामी त्यही गोर्खाका सन्तान हौं, जसले भारतलाई स्वतन्त्रता दिलायो। अब यहीो गोर्खाले भारत देशभित्र गोर्खाल्याण्डको मानचित्र कोर्नेछ। अब त्यो दिन टाड़ो छैन। बंगाल प्रशासनले जबर्जस्ती आन्दोलनकारीहरूलाई जेलमा हालेर उनीहरूमाथि राजनैतिक कैदीको साटो क्रिमिनल जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। बरूण भुजेललाई सही समयमा उपचार गरिएको भए उनी बाँच्ने थिए, तर उनलाई क्रिमिनल जस्तो व्यवहार गरेर पुलिस कस्टडीमै उनलाई मरूञ्जेल राखियो।
यो एउटा हत्या हो। राजनैतिक हत्या अनि यो गणतन्त्रको पनि हत्या हो। यसको जिम्मेवार सोझै बंगाल सरकार, पुलिस प्रशासन अनि विनय तामाङले लिनपर्छ। उनीहरूको भनाई छ-गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीलाई जुन सरकार र पुलिस प्रशासनले हत्या गर्छ, फेरि त्यसै सरकारसमक्ष विनय तामाङले कुन मुखले जाँच गर्नपर्ने माग गरिरहेका छन्?
के यो हास्यस्पद कुरो होइन। जसले माऱ्यो, त्यसले न्याय दिन्छ? बरूण भुजेलको हत्याको जाँच बंगाल सरकारको निकायले होइन, सीबीआईद्वारा गरिनपर्छ भन्ने विद्यार्थी मोर्चाको माग छ। गोर्खाल्याण्डको लागि अन्तिम श्‍वाससम्म बंगालको तानाशाहसँग लड्ने एक साँचो सिपाही बरूण भुजेलको निधनले विद्यार्थी मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्य शोकित छन्।
यस्तो दुःखको घड़ीमा विद्यार्थी मोर्चा उनको परिवारको साथमा छ। उनले आफ्नो ज्यान दिए, तर अन्तिम श्‍वाससम्म पनि बंगाल सरकारसँग सम्झौता गरेनन्। उनी एक असल गोर्खा योद्धा हुन् भने उनले गोर्खाल्याण्डका लागि दृढ़ संकल्प चाहिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफ्नो नाम गोर्खाल्याण्डको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिसकेका छन्।
मीमले पनि छोड्यो विमलको साथ
एनजीसीले भेट्यो गृहमन्त्रीः उठायो त्रिपक्षीय वार्ताको माग